Halqaran – Page 138 – HalQaran.com
Kismaayo (Halqaran.com) – Saraakiisha Ciidamada Jubbaland ayaa waxay shaaca ka qaadeen in hawlgal laga sameeyay tuulooyinka…
DF Somaliya oo Dacwad cusub ka gudbisay Kenya, ‘‘Sharciga caalamiga ah ayay ku xad-gudubtay‘‘!
Muqdisho (Halqaran.com) – Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Kenya ku eedeysay in ay ku xad-gudubtay sharciga caalamiga…
DF Soomaaliya oo Digniin culus u dirtay maamulka Jubbaland (Maxaa cusub?)
Muqdisho (Halqaran.com) – Xukuumada Soomaaliya ayaa digniin adag u dirtay maamulka Jubbaland, waxaana ay sheegtay in…
XOG CUSUB: Maxaa ka jira in ciidanka Jubuuti ee AMISOM oo muddo sanad ah mushaar qaadan?
Muqdisho (Halqaran.com) – Ciidanka dowladda Jabuuti ee ku jira howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa la sheegayaa…
UPDATE: Maxaa natiijo ah oo ka soo baxay maxkamadeyntii maanta ee Wasiirka Amniga Jubbaland Janan?
Muqdisho (Halqaran.com) – Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa maanta waxaa la horgeeyay Wasiirka Amniga Maamulka Jubbaland Cabdirashiid…
XOG XASAASI: Xisbiga uu hoggaamiyo Sheekh Shariif oo dacwad halis ah ka gudbiyay dowladda Farmaajo (Maxa cusub?)
Muqdisho (Halqaran.com) – Xisbiga Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, ayaa sheegay inay dacwad ka…
XOG XASAASI AH: Ma dhabbaa in JUBBALAND ay diyaarad u gaar ah soo iibsatay? & Fashil ku yimid…
Kismaayo (Halqaran.com) – Maamulka Jubbaland ayaa waxaa uu shaaca ka qaaday in markii ugu horreysay uu…
DAAWO SAWIRRO: RW Khayre oo Bixiyay 317,000 oo Dollar oo Dib loogu dhisayo Buundada Baardheere
Muqdisho (Halqaran.com) – Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre, ayaa maanta bixiyay 317,000…
XOG + SAWIRRO: Sidee ku suurta-gashay in Cabdikariin Guuleed iyo Shariif Xasan ay diyaarad ku tagaan Kismaayo?!
Kismaayo (Halqaran.com) – Madaxweynihii hore ee Maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed, oo maanta tagey Magaalada Kismaayo…
WAR CUSUB: Nin Al-Shabaab ah oo la qabtay, kadib markii laga carooday dil uu ka geystay …
Ceelwaaq (Halqaran.com) – Ciidanka Xoogga Dalka ayaa waxay gacanta ku dhigeen xubno si dhow loola xiriirinayo…
KENYA oo ku hanjabtay in Xildhibaano Soomaali Kenyan ah ay xilalka ka xayuubin doonto! (Ogow Sababta!)
Nairobi (Halqaran.com) – Guddiga anshaxa, la-dagaalanka iyo ka hortaga musuq-maasuqa Kenya ayaa sheegay in 10 xildhibaan…
Kismaayo (Halqaran.com) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo Khilaaf uu Muddooyinkii…